छुटाउनु भयो कि ? | Nepali Health
काठमाडौँ, २ माघ । स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले जिल्लाका १७ वटा स्थानबाट अग्रपंक्तिमा खटिएका व्यक्तिलाई कोभिडविरुद्धको थप एक अतिरिक्त मात्रा खोप (बुस्टर डोज) दिने भएको छ ।
January 16, 2022 January 17, 2022 Nepali Health Comment
January 15, 2022 January 16, 2022 Nepali Health Comment
काठमाडौँ, १ माघ । कोभिड संक्रमणले तिब्रता लिईरहेकोबेला नेकपा एमालेको प्रतिनिधि मण्डलले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटि २२ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
January 13, 2022 January 14, 2022 Nepali Health Comment
वीर अस्पतालको प्रमुख डा गुणराज लोहनी, डा विकास देवकोटालाई संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फर्काउन सिफारिस
January 11, 2022 January 12, 2022 Nepali Health Comment
काठमाडौँ, २७ पुस । सरकारले वीर अस्पतालको प्रमुख पदमा डा गुणराज लोहनीलाई दिएको छ । प्रमुख विशेषज्ञ १२ औँ तहको दरबन्दी रहेको वीर अस्पतालमा १२ औँ तहकै डा लोहनीलाई पठाउने निर्णय गरेको हो ।
January 10, 2022 January 11, 2022 Nepali Health Comment
जन्मेको तीन दिनकी एक शिशुको शरीरबाट पौने दुई केजीको ट्युमर हटाइदिएपछि….
काठमाडौँ, २६ पुस । कान्ति बाल अस्पतालका चिकित्सकहरुले जन्मेको तीन दिनकी एक बालिकाको शल्यक्रिया गरी शरीरवाट पौने दुई केजी ट्युमर हटाईदिएका छन् ।